Bandhigyada Cannabis ee TV-yada iyo Filimmada si aad ah looga yaqaan Amazon, Apple TV iyo Netflix • Dawooyinka Inc.eu
Taxanaha TV Cannabis iyo filimaan aad loo jecel yahay oo ku saabsan Amazon, Apple TV iyo Netflix
Xogta laga muujiyo dalka Mareykanka ayaa sare u kacday boqolkiiba 42,7 boqolkiiba wadarta saacadaha loogu talagay bandhigyada xashiishadda sannadka 2019.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay xashiishadda Cannabis-ka ayaa caan ku ah adduunka telefishanka iyo adeegyada qulqulka qadka tooska ah looga sii daayo. Tirada ugu badan ee dadka soo bandhigaya barnaamijyada la xiriira xashiishadda waxay ku sugnaayeen Xeebta Galbeed, gobollada sida California, Washington iyo Oregon, halkaas oo marijuana madadaalo ay hadda sharci ka tahay.
Joshua Otten, oo ah madaxa guud ee adeegga sheyga iyo qaybinta qaybinta Ronin, ayaa soosaaraya adeegyo qulqulaya oo gebi ahaanba u go'ay xashiishadda CBDwaxyaabaha la xiriira. Social Club TV ayaa bilaabi doonta bisha Janaayo 15 iyadoo lagu faafiyo Apple TV, Roku, Amazon Prime, Android TV iyo iOS in ka badan 100 milyan oo guryo ah.
Daawadayaashu waxay filan karaan bandhigyo cusub oo jira sida 'Pot Pie', 'Marijuana Mania' iyo in kabadan 200 saacadood oo ah barnaamijyada asalka ah ee xashiishka laxiriira laga bilaabo barnaamijyada karinta ilaa majaajillada iyo dambiga dhabta ah. Shabakadda ayaa hadda si bilaash ah uga socota THCkanaalka adeega tooska ah ee 'PlutoTV' oo ay maamusho ViacomCBS ee America. Adeegga isdiiwaangalinta ayaa loo bilaabi doonaa sanadka 2020 daawadayaasha hela marinka u ah waxyaabaha gaarka ah, ayuu yiri Agaasime Otten.
"Waxaan dooneynaa inaan noqono maktabada buugaagta ee dadka isticmaala xashiishadda," ayuu yiri Otten - isagoo intaa ku daray in shirkaddu ay ku socoto wadadii ay ku heli lahayd dakhli ka badan $ 4 milyan sanadka soo socda. "Caan ka ahaanta riwaayadaha sida 'Marijuana Mania' waxay cadeyneysaa in baahi weyn loo qabo soo jiidashada iyo madadaalada waxyaabaha xashiishka ku jira."
Mid ka mid ah shabakadaha xayeysiisyada xashiishka ku soo bandhiga, Dope State, 'waa wax lagu qoslo dhaqanka xashiishka ee Kaliforniya oo ay soo bandhigayaan xidigo ay ka mid yihiin Adrian Grenier iyo Dan Harmon, wuxuu socday tan iyo sanadkii 2015 waxaana la daawanayay in ka badan 50 milyan oo daqiiqo.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay xashiishadda Cannabis ayaa sii kordheysa laba jeer heerka hiddo-dhaqameedka sida majaajillada jacaylka iyo bandhigyada sayniska, xogta ayaa leh, iyo qaybta xashiishka ayaa ku koray guusha bandhigyada sida "Dayactirka Sare", "Kala-go '" ee HBO iyo dokumenteriyada diirada saarey xashiishadda.
In ka badan hal milyan oo qoys oo ku nool Mareykanka ayaa siidaayay waxyaabaha la xiriira xashiishadda, iyadoo suuqa West Coast ay ku badan yihiin in ka badan 50 boqolkiiba daawadayaasha Washington, Oregon iyo California, iyo 2019 waxaa jiray 42,7 boqolkiiba koror ah wadarta saacadaha socodka ee bandhigyada la xiriira xashiishadda marka la barbar dhigo 2018, sida laga soo xigtay xogta PearLogix, shirkad xayeysiis iyo tikniyoolajiyadeed.
"Caan ka ahaanshaha noocyada xashiishka ayaa wali ku urursan inta u dhexeysa dhowr cinwaan oo caan ah, laakiin waxaan fileynaa in tani ay kororto sanadka 2020 maaddaama hay'adaha isdabajooga ay riixayaan cinwaanno kala duwan si ay ugu guuleystaan ​​macaamiisha cusub," ayuu yiri William Gorfein, aasaasaha iyo sarkaalka istiraatiijiyadda. at PeerLogix.
Gorfein wuxuu tilmaamayaa guusha HBO ee `` Dayactirka Sare '', oo ah majaajillo raacaya nin gudbinta loo yaqaan `` Guy '', oo u gudbiya marijuana macaamiisha, sababo la xiriira xiisaha ay u qabaan shabakadaha lacagta bixiya ee sii kordhaya ee doonaya inay maalgashadaan waxyaabo badan oo xashiishka diiradda saaraya dhaleecaynta dhagxaanta. Asal ahaan, barnaamijkan TV-ga ah ee la xiriira xashiishadda waxaa loo sii daayay isagoo ah taxane shabakad ah oo ku saabsan barnaamijka fiidiyoowga ah ee Vimeo ee aan xayeysiinta lahayn.
"Nooca xashiishadda ayaa gilgiley in badan oo ceebtiisa taariikheed ah waxayna furi kartaa tirada dadka cusub ee daawadayaasha," ayuu yiri Gorfein.
Netflix sidoo kale waxay si xariif ah uga jawaabtaa hiddaha cannabis
Shirkadda Netflix waxay daabacday dhowr dokumentiyo diiradda saara daroogada cannabis kuwaas oo carrabka ku adkeeyay saamaynta ay ku yeelan karto daryeelka caafimaadka dadka qaar. Dadkii Diiqay, in sanadkii la soo dhaafay on 4 / 20 waxay ku soo baxday Netflix, waxay baareysaa sida dawooyinka marijuana u badbaadin karto nolosha waxayna diiradda saareysaa halganka ay qoysasku la dagaallamayaan carruurta qaba kansarka. Waxay daaweynayaan marijuana, sharciyo dhex dhexaad ah oo hadda ka horjoogsanaya malaayiin cannabis in loo isticmaalo daaweynta kansarka.
Dukumiintiyo kale, sida 'Cawsku waa mid cagaaran', kaas oo ka dooday Abriil 2019, sahaminta taariikhda mamnuucida xashiishadda ee la xiriirta sharciga dambiyada iyo xukunnada marijuana oo ay la socdaan dad caan ah sida Snoop Dogg iyo Damian Marley.
Naadiga Naadiga Bulshadda 'Social Club TV' ayaa ah goobta ugu cusub ee adeegsata xashiishadda cannabis oo keliya. High Times TV (HTTV), oo ah kordhinta joornaalka '' Times Times Magazine ', ayaa laga dooday horaantii sanadkii hore, oo leh madadaalo iyo macluumaad ku saabsan warshadaha marijuana, qulqulka tooska ah ee waxyaabaha ku jira Apple TV, Android iyo Roku.
Waxaan dabcan sii wadi doonnaa inaan si dhow ula socono horumarka ka socda taxanaha TV-ga xashiishadda iyo filimada ...
Sii akhriso Foxbusiness, iyo qaar kale (ENXerada cagaaran (EN)
Wasaaradda ayaa raadinaysa alaab-qeybiyeyaal xashiishad ah
Wasaaradda Caafimaadka, Daryeelka iyo Isboortiga ee Nederland waxay raadineysaa laba shirkadood oo keena ...
THC waxay kaa caawin kartaa yareynta astaamaha cudurka Parkinson
In kasta oo Ameerika loo tixgelin karo dalkii xorriyadda, haddana Yurub waxay safka hore kaga jirtay tobanaan sano ...
Ku wadista wadista daroogada xashiishka 'halisteeda ka khatar yar' marka loo eego daroogada dhakhtar qoray
Daraasad: Dadka sigaarka caba ee sigaar caba waxay u nuugaan waxyaabo ka yar sunta dadka sigaarka caba
Sababo badan oo ay dadka caanka ahi u isticmaalaan alaabada CBD
DaroogadaInc. wuxuu booqday Beerta CBD Beerta Spain: "Waxaan dooneynaa inaan xirfad u yeelano warshadaha CBD"
Daqiiqad muhiim u ah warshadaha: DSM waxay galeysaa adduunka CBD iyadoo lala kaashanayo Mile High Labs